Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ na-emepụta & Ndị na - eweta ya - Factory
Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ (58-18-4)
Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ bụ otu n'ime ihe ndị kasị dịrị na steroid nke nwere ike, nke nwere ike ịgwọ enweghị ụbụrụ n'ime ụmụ nwoke, ma na-agwọ ọrịa cancer ara na ụmụ nwanyị postmenopausal. Ọ na-arụ ọrụ site na imetụta ọtụtụ usoro ahụ ka ahụ wee nwee ike ịmalite ma rụọ ọrụ ọ bụla.
Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ (58-18-4) video
Raw 17-Methyltestosterone powder (58-18-4) Nkọwapụta
Raw 17-Methyltestosterone powder bụ sịntetik, ọgwụ activeanabolic-androgenic steroid (AAS) nke a na-eji mee ihe maka etrogen deficiency na ụmụ nwoke nakwa maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-egosi. Iji mee ka ụmụ okorobịa na-etoru oge, na obere doses dị ka ihe akụrụngwa nke ọgwụ mgbochi nke menopausal maka mgbaaka menopausal dị ka ọkụ ọkụ, osteoporosis, na agụụ mmekọahụ dị ala na ụmụ nwanyị, na ịgwọ ọrịa kansa n'ime ụmụ nwanyị.
Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ bụkwa ihe na-emepụta ọgwụ na-emepụta ihe na-emepụta metetolị na-emepụta ihe na-emepụta etet. Raw 17-Methyltestosterone powder, mimicking testosterone, na-ejikọta ndị na-anabata cytosolic androgen, na ntinye ntụgharị nuklia nke mgbagwoju mgbagwoju anya na-adọta ntinye ederede nke mkpụrụedemede etrogen. Ihe ndị dị na mkpụrụ ndụ ihe nketa na-ahụ maka mmepe na mmepe nke akụkụ nwoke na nwoke na nwanyị. Onye ọrụ ahụ na - ebutekwa nitrogen, sodium, potassium, phosphorus, yana calcium.
Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ (58-18-4) Smmezi
Product Name Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ
Chemical Aha RU-24400;NSC-9701;17α-Methyltestosterone; 17α-Methylandrost-4-en-17β-ol-3-one
Brand Name Android, Metandren, Ule
molekụla Fnhazi C20H30O2
molekụla Wasatọ 302.45
Nkịtị Monoisotopic 302.225 g / mol.l
Mgbu Point 162-168 Celsius C (gbaa.)
Isi okwu: 383.47 Celsius C (ike siri ike)
Ọkara Ndụ nke Ndụ ihe dịka awa 3 (oge 2.5-3.5 dị)
Sume H2O: ≤0.5 mg / ml
Antinye Ejila ọgwụ methyltestosterone ma ọ bụ jiri ya mee ihe banyere ọgwụgwọ oge oge, oge ụbụrụ, na mkpuchi, na ọrịa na-emepụta na ụmụ nwoke, nakwa na obere usoro iji na-emeso mgbaaka menopausal (akpan akpan maka osteoporosis, ọkụ ọkụ, na ịbawanye ume na ume), enweghi ihe mgbu na mgbochi ya, na oria ara ogwu di n'ime umunwanyi
Kedu ihe bụ Raw 17-Methyltestosterone powder (58-18-4)?
17-Methyltestosterone, ihe mgbakwunye mmepụta ihe nke testosterone, bụ ọgwụ na-emepụta steroid (Androgen na anabolic steroid) (AAS). A na-ejikarị ya eme ihe maka ịgwọ ọrịa nke testosterone dị ala na ụmụ nwoke, na-egbu oge na ụmụ nwoke, na obere doses dị ka usoro ọgwụgwọ homopaosopa na mgbochi dị ka akwara ọkụ, osteoporosis, na agụụ mmekọahụ dị ala, na ịgwọ ọrịa kansa na ụmụ nwanyị (1-3). O yiri ka chacha acha ọcha ma ọ bụ kristal ọcha ma ọ bụ ntụ ntụ, nke a na-edozi na windo dị iche iche, ma ọ bụ nke a na-adịghị edozi mmiri. Ọ ga-edo onwe ya n'okpuru nchịkwa ọnụ.
A chọpụtara na Methyltestosterone na 1935 ma mee ka e jiri ya mee ihe na 1936. A na-edepụta ya na obere oge mgbe nchọpụta nke testosterone, bụ otu n'ime ọgwụ ọgwụ AAS mbụ. 17-Methyltestosterone, karịrị ọrụ ahụ ike ya, nwekwara ike iji mee ka ahụike na arụmọrụ dị mma.
Kedu nsị 17-Methyltestosterone ntụ (58-18-4) na-arụ ọrụ
17-Methyltestosterone na-emetụta site na isi ụzọ abụọ: mmalite nke onye na-anata androgen receptor (kpọmkwem ma ọ bụ dịka DHT), na site na ntughari na estradiol na mmalite nke ụfọdụ ndị na-enweta estrogen.
17-Methyltestosterone nwere ike ịbanye n'ime mkpụrụ ndụ anụ ahụ, bụ nke na-ejide ya na androgen receptor, ma ọ bụ belata na 5A-dihydrotestosterone (DHT) site na 5A-reductase enzyme cytoplasmic. DHT na-ejikọta otu onye na-anabata ihe na-emekarị etrogen, ọbụna na-ekwenyekwu ike na androgenic. Onye na-anabata T-receptor ma ọ bụ DHT-receptor nwere mgbanwe nke na-enye ya ohere ịbanye n'ime oghere cell ma jikọta ya kpọmkwem na usoro kpọmkwem nke nucleotide nke DNA chromosomal, nke a na-akpọ ihe mmeghachi omume hormon (HREs). Usoro a na-achịkwa ihe ndekọ nke mkpụrụ ndụ dị iche iche, na-emepụta mmetụta androgen.
Raw 17-Methyltestosterone powder (58-18-4) Ụdị
17-Methyltestosterone na-edozi ọnụ. Ngwado usoro a dị iche iche dị iche iche dabere na afọ, mmekọahụ, na nyocha nke onye ọrịa ahụ. A na-agbanwe usoro ọgwụgwọ dịka nzaghachi nke onye ọrịa na ọdịdị mmeghachi omume ọjọọ. Mmechi ọgwụgwọ na ụmụ nwoke androgen-deficient na-achọkarị 10 ka 50 mg nke 17-Methyltestosterone kwa ụbọchị. Otú ọ dị, a ghaghị iburu afọ ndụ oge na azụ afọ abụọ ma chọpụta ntinye nke mbụ na ngbanwe usoro ahụ. Ihe eji eme ihe n'ilekọta oge na-egbu oge n'ozuzu n'ozuzu nke nke enyere n'elu, nakwa maka oge dị mkpirikpi, dịka ọmụmaatụ 4 na ọnwa 6. Maka ọgwụgwọ ụmụ nwanyị na-arịa ara ara, usoro ọgwụ nke 17-Methyltestosterone na ụmụ nwanyị sitere na 50-200 mg kwa ụbọchị.
Raw 17-Methyltestosterone ntụ ntụ (58-18-4) uru
17-Methyltestosterone ntụ ntụ nwere ike ịgwọ mgbaàmà dị iche iche dị ka hypogonadism, cryptorchidism, oge na-egbu oge, na ọrịa na-erectile na ụmụ nwoke, nakwa na obere usoro iji mesoo symptom menopausal (akpan akpan maka osteoporosis, ọkụ ọkụ, ma na-amụba libido na ume) na imebi ihe.
A na-ejikwa ya na ndị inyom na-agwọ ọrịa ara ara, nkuba n'ihi ime afọ, na ntinye nke estrogen ọ nwere ike ịgwọ mgbaàmà nke mụọ nwoke. E jikwa ya eme ihe na estrogens nke a chọpụtara maka ọgwụgwọ nke oke ihe mgbaàmà vasomotor nke metụtara minitọm na nwanyị.
Ịzụta Nkọcha 17-Methyltestosterone (58-18-4) si Buyaas.com.
Testosterone Ụdị Propionate ntụ ntụ (57-85-2)
Raw 1-Testosterone (Dihydroboldenone) ntụ ntụ (65-06-5)
Ụrọ Testosterone ụra (58-22-0)